Yilokhu okwenzekayo: ubudlelwane Sekuyisikhathi eside yaphela nale nsizwa, futhi kuyinto engenakwenzeka ukuba akhohlwe. Mhlawumbe, enhliziyweni ithemba wayesaphila sikwazi avuselele imizwa ubudala futhi uvuselele uthando ... Kodwa wahlangana ukube omunye? Ngazi kanjani uma ngabe lowo owayeyintombi yakhe? Phela, isibopho esiphakathi kwakho cishe lingekho: ungenawo ukubiza up, azenzeki ezindaweni ezifanayo, futhi baphinda baba abangane une zihlukile. Kodwa ngakho mina ukwaziswa izenzakalo ezenzeka ekuphileni kwakhe siqu ufuna! Eqinisweni, indlela yokwanelisa ilukuluku bawo lapho, ingakhokhi ngisho nohlamvu olulodwa, kodwa abaningana ... Kodwa okokuqala kudingeka wazi ukuthi, kodwa kuwufanele zokuchitha isikhathi sakho ozama ukungena emanzini, okuyinto Sekuyisikhathi eside oputshukile. Mhlawumbe kwase kuyisikhathi eside kusukela sikukhohlwe ngisho ngezinye izikhathi uyakhumbula ngezinto zesikhathi esidlule?
Khumbula ukuthi yangaphambili amantombazane abafana
Yiqiniso, ukukhumbula, ngoba akukho womuntu awuwona alien! Umbuzo uwukuthi, Ziyini lezi izinkumbulo. Kungenzeka ubuhlobo bakho wawunzima ngakho futhi kunzima ukuthi umuntu efuna uyikhohlwa njengoba okwakwenzeka. Girls ngokwabo ngokuvamile kukhona umchithi uthando sobunye. Khumbula kaningi kangakanani wena iphuma isoka amahlazo wakhe, iconsi, bamhlasela umuntu eqhuma umhawu iyagula esiqinile. Akunakwenzeka ukuthi injani eziningi, uma kuyindodana, yebo, akuyona masochist zakudala.
Enye iphutha elivamile abesifazane - azame kubangele umhawu nesoka lakhe. Ngenxa yalesi intombazane ngokunganaki ukuvusela abanye imizwa yothando nabangani bakhe, insizwa, futhi abaqapheli ukuthi ngokwenza kanjalo kwamfaka esimweni kakhulu amahloni. Mhlawumbe umfana ngesikhathi esifanayo ngokuzama ukuba singabonisi abonisa ukuthi ngaphakathi kuye zineminyaka isiphepho yokuthonywa imizwelo engakhi, nentombi yakhe ubheka lokhu njengesibusiso uphawu insensitivity futhi sithuthukisa ucwaningo lwabo.
Lokhu ukuziphatha kungaholela yokubhidlika ubudlelwane, futhi akukho isimanga yokuthi guys kulezi zimo ungaceli ngempela, "Ingabe owayeyintombi emuva?" Bamane ubelethe Ubuhlobo omusha, sikhululeke kakhudlwana futhi zikhululekile. Uma intombazane waphonsa yena insizwa, ngoba uthande omunye, kudala kakhulu negalelo elinamandla ku ukuzazisa besilisa futhi ungakuvumeli ukuba guy ngiphuphe uvuselela uthando ubudala. Kodwa uma ukudabuka kwenzeka ngokusebenzisa iphutha lakhe, isibonelo, ngenxa yokuthi lokungakholwa kwakhe, osemusha ungakwazi ngazo zonke izindlela zama ukubuyela eyintandokazi. Ngokwemvelo, esimweni esinjalo, ecabanga ngeke ukuphuma zekhanda lakhe.
Kungani amantombazane ingabe ngezinye izikhathi ufuna ukubuyela
Ngisho noma ukuhlukana kwaba ngoba lindoda-ke yayiyisikhulu kule kusolwa, isikhathi kungaba bushelelezi out izikhalo eziningi. Thanda sokuxosha ngisho simple, futhi ngokuvamile kakhulu kuvela kulesi simo kusukela inhliziyo; intokazi ufuna ukubuyela yangaphambili, kodwa akazi ukuthi ukukwenza. Ubiza, inikeza ukuhlangabezana, futhi le nsizwa acabanga: noma ukuxhumana owayeyintombi? Futhi akusiyo njalo impendulo yalo mbuzo omuhle.
Abesifazane bavame ukuthi indoda angase kabusha, uma wenza kulo mzamo. Kodwa akunjalo. Ukuziphatha kwabesilisa abadala hhayi alungisa kalula. Kalula nje, uma umfana othambekele izinguquko, akudingekile ukuba ulinde ukuthi ahlupheke ekuhlaleni ngokwahlukana, wayengeke aphinde acabange ukuziphatha kwabo futhi ibe okuyisibonelo eyodwa nowesifazane indoda. Sokugembula "uDon Juan" kuyize ngisho ukubuza, "Ingabe unayo intombazane ohlangothini?" - namanje ngeke iqiniso.
Ukushiya - shiya
Umbhangqwana obunobunye ngempela akuvamile ushiye. Uma indoda nowesifazane emva nengangibajwayele ngenkathi bafinyelela esiphethweni ukuthi ungethele babe ndawonye, ngakho-ke ubuhlobo akusho ngempela iphumelele. Mhlawumbe zazakhiwe ku ugqozi, okuyinto, njengoba sazi, akaphili eside. Inyunyana ujabule ukucela ushintsho kuza ezijulile umuzwa - uthando, futhi nalo okunamathiselwe eqinile.
Uma leyo mali ngeke kwenzeke, it is hhayi ukuqeda zomhlaba! Kukhona yomuntu eyokwenziwa ibe ezikufanelayo ngaphezulu. Kodwa imihlangano ijabulise ezingase zenzeke endaweni yakini, udinga ivale ngokuphelele phansi ikhasi ubudlelwano esidlule, hhayi ukuthola kunzima, wazi kanjani ukuthi yini noma cha owayeyintombi yakhe. Kuyadingeka ukuba ugxile ekuphileni kwakhe siqu, nakuba izolo umnumzana ufuna ukuhlangana nomuntu.
abantu Ideal azenzeki! Wonke umuntu eziningi amaphutha, nokho, njengoba kwabesifazane. Nokho, abathandi amankazana kuvame okuthiwa "izibuko rose-ezinemibala", kodwa kubalulekile ukuba senze umzamo futhi zama ukubheka ex-isoka nge iso esibucayi.
Futhi into engcono owesifazane ungenza esimweni lapho kwakudingeka ukhohlwe esidlule - kangakanani ukuthandana futhi. Kodwa lezi zinto ngeke kwenziwe, uma abake bacabange ngokuthi umuntu othanda eside edlule, siqala ngendlela engafanele. Lapha, ngokwesibonelo, wena liphindelela okufunayo impendulo Inthanethi umbuzo mayelana nendlela ukwazi ukuthi le ntombazane wangaphambili ... Kodwa ngalesi sikhathi ungase nginikele izinto kakhulu okulusizo ngawe: uhambo ezithakazelisayo, ukuyothenga uhambo futhi SPA- salon, amakilasi e-okuhle club nokunye. d. kumele sifunde ukushintshela imicabango yabo.
Ekuqaleni, lokhu kuzodinga imizamo esiqinile-willed, kodwa kancane kancane kwakheka nomkhuba wokuphuza hhayi ucabanga okwadingeka bayishiye. Iningi ukuhlehlisa wangaphambili hhayi pesto a ukuhlupheka, eziningi ezithakazelisayo emhlabeni jikelele kanye nezenzakalo ezenzeka kuwo - nakanjani ukusiza ukuba abakhohlwa okwenzeka esikhathini esidlule. Kodwa uma ilukuluku okungenamsoco ngokuphila Man yakhe siqu akabashiyi wena-ke, njengoba kushiwo ngenhla, zikhona izindlela eziningana sokusanelisa.
Ukuxhumana nomphakathi ukusiza ukuze ufunde kabanzi
Ngazi kanjani ukuthi lowo owayeyintombi yakhe? Okokuqala, ungasebenzisa i-inthanethi futhi uthole umngane bakho kumanethiwekhi omphakathi. Uma unalo uthando elisha, bese mhlawumbe uthumele isithombe uthando lwakhe lapho. Nokho, guys ungathandi ukulayisha izithombe siqu emphakathini, nokuthi zihluke kakhulu abobulili bubuhle.
Yebo, iphuzu elibaluleke ekhasini we lover esidlule kungcono uhambe nge-akhawunti mbumbulu ezintsha. Ake sithi akazi nguwe. Qala ingxoxo, ukubeka Huskies esikhundleni sayo uma kungaba nzima kakhulu ukuxhumana ke lokhu sodwa kusikisela ukuthi kungenzeka kuphela. Kodwa endabeni yakhe, uma unalo intombi, akunakwenzeka ukuthi izosebenza kanjalo ukuxhumana nomuntu ongamazi. Nakuba yini engenzeka. senzo Virtual ize uphoqa ...
ucingo Omunye ifoni
Ukuze usebenzise indlela yesibili, intombazane kufanele sibe nesibindi futhi hhayi uyaziqhenya. Ushiye inombolo yefoni ex-isoka? Kuhle kakhulu! Zvyaknite kuye ngandlela-thile ukuthi ngezinye izikhathi, izaba - kungaba iliphi iholide noma ngosuku lwakho lokuzalwa. Noma beveza umbuzo zingaphendulwa kuphela ex yakho.
Ngokuvamile, ucingo ukuze uqale ingxoxo, bese, in the inqubo Improvisation, uzokwazi ngobumnene ukubuza mayelana ngempilo yakhe yangasese. Advance, uzilungiselele ukuzwa into efana naleyo: "Futhi lokho ingabe uyathanda uma Nginombuzo intombi?" Ingabe unayo izaba! Ekugcineni, unelungelo okufanele ukhathazeke ngakho Isiphelo sakhe, ngoba esidlule asishintshi, laphakathi kwawo kulelitshe nobabili iboshelwe kakhulu.
Ukuxhumana zokuxhumana nabantu, ngisho ingxoxo yocingo ayikwazi ukuvula lonke iqiniso lokuphiliswa kwakhe. Phela, le nsizwa umane amanga. Kodwa uma isibindi futhi kancane ngemva kwakhe inhloli, sizokwazi ukubona zonke ngamehlo ami siqu. Nokho, kudingeka nje onesibindi bathambekele adventurism.
Kodwa nalapha futhi, hhayi yonke into ilula. Ngisho noma ubona intombazane eyayingumngane wakhe ezinsukwini ezimbalwa ilandelana nge entombazaneni efanayo, kungenzeka ke ukuthi kukhona into embi kangako, kulezi zici kanye - wokuzilibazisa encane.
Yini engasiza umngane?
Khona-ke, bangabangani, ukuthi umzuzwana nzima ukophula! Kungani ungaceli begqoka yakho ukuze ayohlola ulwazi oludingayo. Phela, zonke girl has a ulwandle abangane, phakathi kwabo kukhona ngokuqinisekile abantu bengena umbuthano kwangaphakathi owayedlalela (osebenza nayo, labo esifunda nabo nofunda nabo, abangane ebuntwaneni, izihlobo, nokunye. D.) yakho. Uma kunjalo, yebo, uhlala edolobheni efanayo nani.
Awudingi ukuthatha nawe ebuhlotsheni obusha
Ulwazi kuyadingeka ukuba iqaphele futhi baqala sihambe ekuphileni okusha. Uma wangaphambili namanje izizwe inesizungu futhi unomuzwa wokuthi uyikhohlwa - ngenhla amandla akho, ungazama ukuvuseleleka ubudlelwane. Kodwa uma aphulwa ukukhathaza ngenxa yamaphutha akho, uzodinga ukushintsha okuningi ngokwako. Umngane wakho angase acabange kwesiqubulo esithi: "Ingabe ngizoba naso entombazaneni efanayo nomona, njengalena ngawo Ngiyishiyile?" Uma ungakwazi ukufakazela kuye ukuthi silungise hold futhi musa ukuphinda amaphutha esikhathi esidlule.
Futhi uma intelligence libike ukuthi umnumzana wangaphambili kwakusadingeka isikhathi ukuthola uthando olusha, ake zindaba kuyoba iphuzu lwakho lokugcina enovelini ubudala. Cala kubhala entsha, futhi makube enhle kakhulu, romantic nothando eside ndaba, okuyinto kuphela engenzeka kulomhlaba esinesono.